Ny sidina voalohan'ny Qatar Airways dia tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Gothenburg Landvetter
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny sidina voalohan'ny Qatar Airways dia tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Gothenburg Landvetter
Ny sidina voalohany tsy miato nataon'i Qatar Airways avy any Doha mankany Gothenburg, Suède dia tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina Gothenburg Landvetter androany, manamarika ny vavahady faharoa mankany Soeda. Ny sidina Qatar Airways 177, tantanan'ny Boeing B787 Dreamliner of the-art-of-the-art, dia nandao ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena (HIA) Hamad tao Doha ny Alarobia tamin'ny 8:20 maraina ary tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Gothenburg Landvetter tamin'ny 1:00 tolakandro.
Manatrika ny sidina voalohany mankany Gothenburg, tetikady ara-barotra lefitra avaratry ny Qatar Airways, Andriamatoa Simon Newton Smith.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Faly be izahay fa handefa serivisy mivantana any amin'ny tanàna tsara tarehy Gothenburg, fanampim-panazavana vaovao amin'ny tambajotranay eropeana. Ity vavahady Nordic vaovao manan-danja ity dia hanome fifandraisana bebe kokoa amin'ny mpizahatany sy amin'ny mpandeha fialamboly, ary hanampy amin'ny fampifandraisana ny vahoaka soedoà amin'ny tambajotran'izao tontolo izao midadasika misy toerana 1650 manerantany. Manantena izahay fa hitondra mpitsidika any Gothenburg, izay ahafahan'izy ireo miaina ny fahafinaretana atolotry ity tanàna mahafinaritra ity. ”
Ny Lehiben'ny Executive Executive any Swedenavia, Andriamatoa Jonaas Abrahamamsson, dia nilaza fa: "Suède no toekarena lehibe indrindra any Skandinavia ary iray amin'ireo toekarena matanjaka indrindra any Eropa. Ny làlana mivantana vaovao dia zava-dehibe amin'ny fandraisana anjara, satria ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny tsena dia zava-dehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany any Suède, ny vondron'orinasa, ary ny hisarihana ny famatsiam-bola sy ny fahalalana any amin'ny faritra. Faly izahay fa afaka nanolotra ny Qatar Airways ho an'ny tsena lehibe any Andrefan'i Suède izahay, any Swédia, miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka amintsika, ka nahatonga ny làlana mivantana vaovao manelanelana an'i Gothenburg sy Doha. Faly be izahay mandray an-tanana ity seranam-piaramanidina manerantany ho any Göteborg Landvetter Airport.
“Ny lalan'i Qatar Airways mivantana dia vokatry ny fiaraha-miasa nahomby teo amin'ny samy Suwavia sy ireo mpiara-miombon'antoka isam-paritra. Izahay dia mampiseho an'i Qatar Airways ny mety ho tsena any Suède Andrefana. Faly indrindra i Swédia sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'i Suède Andrefana dia miara-miarahaba an'ity zotram-piaramanidina Atsinanana afovoany ambony ity mankany amin'ny seranam-piaramanidina Göteborg Landvetter. ”
Tamin'ny lanonana fahatongavan'ny fiaramanidina, Qatar Airways dia notolorana mari-pankasitrahana "ny lakilen'ny tanànan'i Gothenburg", ho fankasitrahana ny tombony lehibe hoentin'ny serivisy mivantana any amin'ireo orinasa Suère Andrefana amin'ny alàlan'ny fanomezana fifandraisana bebe kokoa amin'i Afrika sy Azia. Ny loka dia natolotr'Andriamatoa Henrik Einarsson, talen'ny fananganana orinasa sy fampiasam-bola, Faritra Business Göteborg AB.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpitatitra entana iraisam-pirenena mitondra entana an'habakabaka manerantany, ny Qatar Airways Cargo dia efa manana toerana lehibe ao amin'ny faritra Nordics, miasa sidina mihazakazaka mankeny Helsinki, Oslo, Copenhagen ary Stockholm, miaraka amin'ireo mpitatitra entana efatra isan-kerinandro avy any Oslo. Ny sidina dimy isan-kerinandro mitazona kibon'ny vatana mankamin'ny Gothenburg dia hampiakatra ny taonina ho 1000 taonina isan-kerinandro avy amin'ny faritra Nordic. Ny sidina mivantana avy any Gothenburg dia hahazo tombony lehibe amin'ny indostrian'ny fiara, pharma, haitao avo lenta ary orinasa ankapobeny any Suède, ary hanolotra fifandraisana mahomby amin'ny Moyen Orient, Afrika, Azia, Aostralia ary Nouvelle Zélande amin'ny alàlan'ny foiben-toeran'ny kanto ao Doha.
Gothenburg, tanàna lehibe faharoa any Suède, dia manolotra hetsika marobe ho an'ny mpitsidika, manomboka amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo miaraka amin'ny iray amin'ireo lakandrano marobe ao amin'ny seranan-tsambo, ka hatrany amin'ny fitsidihana ireo nosy Bohuslän eo akaiky eo, nosy lehibe iray ahitana alan-kesika mandrafitra fjord toy ny farihy sy vavahady
Mba hanandramana santionan'ireo hazan-dranomasina ao Gothenburg, mankanesa any Feskekörka, tsenan-trondro malaza ao an-tanàna, izay mampiseho karazana makamba, osters, tahiry, hazandrano ary lobster. Na mivezivezy eny amin'ny arabe amin'ny faritr'i Haga, izay ahitanao trano hazo efa zokiolona voatahiry tsara, karazana Boutique, galeria ary trano fisakafoanana am-polony mahaliana.
Ireo mpandeha mandeha any Suède ao amin'ny Business Class dia afaka manantena ny hiala sasatra amin'ny iray amin'ireo fandriana faran'izay aina sy feno lafaoro ary koa fampitaovana ny serivisy sakafo sy zava-pisotro kintana dimy, izay atolotra ho 'sakafo ilain'ny fangatahana.' Azon'ireo mpandeha atao koa ny manararaotra ny rafitra fialam-boly azon'ilay fiaramanidina, Oryx One, izay manolotra safidy fialamboly 4,000.
Qatar Airways dia miasa andiany maoderina maherin'ny 200 amin'ny alàlan'ny foibeny, Hamad International Airport (HIA) mankany amin'ny toerana 160 manerana an'izao tontolo izao.
Kaompaniam-piaramanidina marobe nahazo loka, Qatar Airways no nantsoina hoe 'Class Business Best World' tamin'ny World Worldline Airlines Awards 2018, tantanan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka Skytrax. Izy io koa dia nantsoina hoe 'Seza Best Class Class Business,' 'Airline tsara indrindra any Moyen Orient', ary 'Best Airline Lounge ho an'ny Kilasy voalohany manerantany.'
Ao anatin'ny drafitra fanitarana tsy mitsaha-mitohy, Qatar Airways dia mikasa ny handefa toerana vaovao mahafinaritra mandritra ny volana ho avy, ao anatin'izany i Mombasa, Kenya; Gothenburg, Suède ary Da Nang, Vietnam.
Doha (DOH) mankany Gothenburg (GOT) QR173 dia miainga 01:55 tonga 06:35 (Mon, Thu, Sun)
Gothenburg (GOT) mankany Doha (DOH) QR 174 miainga 08:05 tonga 16:10 (Mon, Thu, Sun)
Doha (DOH) mankany Gothenburg (GOT) QR177 dia miainga 08:20 tonga 13:00 (Wed, Sab)
Gothenburg (GOT) mankany Doha (DOH) QR178 miainga 15:10 tonga 23:15 (Wed, Sab)
Airbus dia miantso ny lohan'ny fiaramanidina miaramila vaovao
IATA: Ny zotram-piaramanidina mandeha mandritra ny folo taona anaty mainty